ယူနီကုဒ်နဲ့ ဂါထာရေးကြမယ် | Myanmar Language
ယူနီကုဒ်နဲ့ ဂါထာရေးကြမယ် Submitted by Arkar Shine on Thu, 11/08/2012 - 05:30 မြန်မာစာလုံးပေါင်း သတ်ပုံကျမ်းမှာ ဥုံ​ေဩာင်း ဆိုပြီး ပါပါတယ်။ ဥုံ ကို ရိုက်လို့ရပေမဲ့ ေဩာင်းကတော့ မရပါဘူး။
ဘိုးတော် ဦးအောင်မင်းခေါင်ရဲ့ ေဩာင်း တစ်ရာရှစ်ကွက် အစချီ ဘုရားရှိခိုးလည်း ကိုးရိုးကားယား ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ပညာရှင်များ ကူညီပြုပြင်ကြပါဦး။ ကျွန်တော်က ဒီဆိုက်ရဲ့ လှုပ်ရှားမှု သိပ်နည်းနေတယ်လို့ ထင်တယ်။ ပို့စ် အသစ်တွေ မမြင်ရတာလည်းကြာပြီ။
နောက်ဆုံး တင်ခဲ့တာ ၈လနဲ့ တစ်ပတ်တောင် ရှိသွားပြီ။
Lionslayer Sat, 12/22/2012 - 17:49 Permalink Details
You need to mention which font (myanmar3/padauk/tharlon, etc.), which layout (mywin/myanmar3/myansan, etc) and which software (keyman/NHM/keymagic/Ekaya, etc) so that we can send bug report to developers. It's better if you can attach screenshot. I use latest version of Tharlon font and latest version of keymagic and I can type ဩောင်း .
Arkar Shine Thu, 12/27/2012 - 10:42 Permalink Font
I use Myanmar3font and Keymagic 1.5.1. Although, I cannot type, I saw your word correctly. And I'm very sorry that I don't know how to take screenshot. The version of Myanmar3which I'm using is 1.358, January 5, 2011.
Arkar Shine Thu, 01/10/2013 - 08:21 Permalink Screenshot
Could you please explain me how to post screenshot? I've made screenshots but I can't post.
Lionslayer Sat, 01/26/2013 - 14:36 Permalink Upload Somewhere Else (tinypic, imageshack etc)
The comment has somehow no option for uploading images. But you can upload somewhere else and post the link here.
twhlinn Mon, 02/11/2013 - 18:42 Permalink Which type of font or keyboard
ကျနော် စမ်းသပ်ကြည့်ရသလောက် မြန်မာ ၃ ကို မြန်စံကီးဘုတ်နဲ့ ရိုက်တာမှာဖြစ်တာပါ။ နောက် ဇော်ဂျီယူနီကုဒ်ကီးဘုတ်လည်း မရပါဘူး။
မြန်မာယူနီကုဒ် keyboard နှင့်ပတ်သက်၍2weeks3days ago
Which type of font or keyboard4months 1 week ago
Upload Somewhere Else (tinypic, imageshack etc)4months3weeks ago
continue5months6days ago
Screenshot5months 1 week ago
Tab Title5months2weeks ago
Font5months3weeks ago
Dear all5months3weeks ago
myanmar keyboard5months4weeks ago